နည်းပညာတိုးတက်မှုက ရေရှည်တည်မြဲလာနိုင်ပါ့မလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » နည်းပညာတိုးတက်မှုက ရေရှည်တည်မြဲလာနိုင်ပါ့မလား
Posted by manawphyulay on Nov 12, 2012 in Computers & Technology, Know-How, DIY, Software & Links |3comments
လူငယ်တိုင်းကလည်း ကွန်ပျူတာမရှိရင် ခေတ်မမှီတော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မိဘများကို ပူဆာလာကြတာလည်း တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဘာအတွက်သုံးမလဲဆိုတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ ဘာမှ မဖြေနိုင်ကြ ပါဘူး။ နယ်တွင် မပြောနဲ့ မြို့ပေါ်မှာတောင် ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘာလဲမေးရင် chat လို့ရတယ်ပဲ သိတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ နည်းပညာ တိုးတက်လာသလောက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ အမြင်များလည်း ပြောင်းလဲဖို့ အရမ်း လိုအပ်လာနေပါပြီ။ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘာမှန်းသာ မသိကြတာ ကွန်ပျူတာသင်ပြီဆိုတာနဲ့ Gtalk ပြောဖို့နဲ့ facebook အကောင့် မရှိသေးဘူးလို့ ပြောတဲ့သူချည်းပါပဲ။ ယခုတစ်လော ရေပန်းစားနေတဲ့ ဒီ Social Network လို့ လူတိုင်းလိုလို အရူးအမူးဖြစ်နေတဲ့ facebook ကြီးက ပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်နေခဲ့ပါရောလား။ တကယ်လို့သာ facebook ပဲ သုံးနေကြတဲ့လူတွေ ဒီဆိုက်သာ ပိတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို သုံးကြမလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေ တွေးနေမိပါတော့တယ်။ တစ်ချို့က facebook သုံးမှ ခေတ်မီတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကတော့ လူတိုင်းလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တွေ့တာနဲ့ facebook မှာ မင်း ဘော်ဒါ ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲ။ မင်းမိတ်ဆွေက ငါထက်နည်းသေးတယ်ဆိုပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေတောင် ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ အတော်များများ လူတွေရဲ့ အမြင်က အင်တာနက်သုံးတာ facebook ကိုပဲ သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက အတော်ကို လွှမ်းမိုးထားတာ တွေ့ရတယ်။ facebook မသုံးတဲ့သူက ခေတ်နောက်ကျန်နေသလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျီတော့ပဲ ဖွင့်သုံးတတ်ပြီး ဂျီမေးလ်နဲ့ ဘာကွာလဲ မေးတဲ့သူက ရှိသေးတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ အမြင်တွေက ဒီထက်ပိုပြီး ပွင့်လင်း လာစေချင်တယ်။ ကျောင်းပညာရေးလျှောက်ရင် ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ရမလဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာချင်ရင် ဘယ်ဟာကို ၀င်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးလာစေချင်တယ်။ ခုဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်းတွင် အွန်လိုင်းကနေ ဥပဒေပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူလိုသူတွေအတွက် ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဥပဒေပညာ ဌာနက ဦးစီး၍ ဥပဒေပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Law –DL) သင်တန်းကို ခေတ်မီနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော Web-Based Teaching System (WBTS) ကို အသုံးပြုပြီး Online ဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးမယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ သင်ကြားပို့ချပေးမယ်ဆိုတော့ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာ၊ သွားရလာရလည်း ဒုက္ခမရောက်တဲ့အပြင် ဘွဲ့တစ်ခုကိုလည်း ၁၀ လနဲ့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။ ဒီလို ပညာရေးတွေ ဒီထက်ပိုမို တိုးတက်လာစေချင်နေတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
ယခုတော့ လူငယ်တွေ အတော်များများက facebook မှာဘဲ အချိန်တွေ အတော်အကုန်ခံနေတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ခေတ်မီသူတိုင်း facebook သုံးသည်ဆိုသလိုပေါ့။ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းဦး၊ သတင်းထူးတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ရရှိနေတာကတော့ facebook ဆိုတဲ့ လူမှုဝက်ဆိုက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်သာ အမှန်တကယ်ပိတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် လူအတော်များများ facebook စွဲ ရောဂါများ ရသွားကြ မလားဆိုတာ မခန့်မှန်းနိုင်သလောက်ပါပဲ။ လူမှုဝက်ဘ်ဆိုက်ကလည်း ဒီတစ်ခုထဲပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ အမြဲအသုံးမပြုပေမယ့် သုံးဖြစ်တဲ့ဆိုက်တွေ အတော်များများတော့ ရှိပါတယ်။ အနည်းအကျဉ်း ဖော်ပြရရင်တော့ myspace, twitter, digg, flickr, bebo, hi5, tagged အပြင် http://www.e-learningcenter.com/free_html_course.htm ဒီလို လေ့လာစရာ တချို့ဆိုက်လေးတွေကလည်း အတော် သဘောကျဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီဆိုက်လေးကတော့ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသလောက် ကိုယ်ပိုင် website လေးကို ပုံကြမ်းကနေ အချောသပ် အကောင်အထည်ပေါ်တဲ့အထိ လုပ်ကိုင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်elearning Center က ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အွန်လိုင်းသင်တန်းကို တက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံ HTML နဲ့ XHTML ကို webpages အခြေခံတွေ တည်ဆောက်တဲ့အထိ standard ထားပြီး လုပ်ကိုင်ပုံတွေ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ HTML Training Cense အတွက်ကိုတော့ ငါးနာရီကြာနဲ့ အပြီးအစီးတက်ဖို့ အခမဲ့ သင်ကြားပေးပါတယ်။ အွန်လိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အခမဲ့ပို့ချနေသော www.alison.com , www.masterclass.com, www.about.com, http://www.webmastercourse.com/ စသည့် ဆိုဒ်များ တွင်လည်း လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။ Alison ဆိုဒ်တွင် သူပြဌာန်းထားသော မော်ဂျူးပြီးဆုံးပါက စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းအောင်လက်မှတ် diploma ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ Masterclass တွင်မူ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်ခန်းစာ ၁၀ခန်း ပါပြီး အသေးစိတ်ကိုလည်း အချိန်၃ လမျှ သင်ယူရပြီး စာမေးပွဲနှင့် case study တွေပါဖြေဆိုရပါမယ်။ အောင်မြင်ပါက အွန်လိုင်းတွင် ဒေါ်လာ ၂၀ မျှသာသွင်းပြီး အောင်လက်မှတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဟားဗက်နှင့် အမ်အိုင်တီတို့ က လွင့်တင်ထားသော ၀က်ဆိုဒ်များတွင် ၄င်းတက္ကသိုလ်ထုတ်နာမည်ကြီး Harvard Business Review နှင့် MIT Sloan Management Review တို့ကို အခမဲ့ဖတ်နိုင်တာကို တွေ့ရှိရပြီး။ ဆက်လက်၍ ကျွမ်းကျင်အဆင့်တွေကို သင်ချင်ရင်တော့ သင်တန်းကြေးပေးသွင်းသင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ about ကတော့ နယ်ပယ်ဒေသ အသီးသီးကနေ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး သင်ခန်းစာတွေကို အလှည့်ကျဖြေဆို လေ့ကျင့်ပေး နေတဲ့ အင်တာနက်စာသင်ကျောင်းတစ်ခုလို့တောင် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ Web ရဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ အချိန်ကုန်ခံနေမယ့်အစား about လို နေရာမျိုးသာ အချိန်ယူပြီး လေ့လာမယ်ဆိုရင် လက်တွေ့ကျတဲ့ သဘောတရားမဆန်တဲ့ နည်းပညာရပ်ပေါင်းတွေကို တစ်နေရာထဲနဲ့ အကုန်သိရှိသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတလိုက်စားသူတွေအတွက် wikipedia ထက်တောင် ဖွဲ့စည်းမှု ပိုမိုစုံလင်တဲ့ သင်ခန်းစာ စွယ်စုံကျမ်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ network site တွေက တစ်နှစ်လောက်သုံးပြီး အလိုလိုပိတ်သွားတာတွေလည်း ကြုံဆုံရ ပါသေးတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် မြန်မာဖိုရမ်ဆိုက်တွေကလည်း လေ့လာစရာ ကောင်းလှပါ သေးတယ်။ ကျွန်မ ပြောချင်တာကတော့ facebook လိုနေရာမှာပဲ အချိန်ကုန်မခံဘဲ နည်းပညာများ လေ့လာစရာ၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံတကာ လူမှုကွန်ယက်တွေရှိတဲ့ နေရာတွေကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ၀င်ရောက် လေ့လာစေ ချင်ပါတယ်။
ခုတစ်လော နာမည်ကြီးနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာကို like ပေးတိုင်းသာ ဆုရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက ထိပ်ဆိုသလိုရောက်ရှိနေမှာ မြင်ယောင်နေပါသေးတယ်။ အဲ myspace ဆိုတဲ့ website တစ်ခုရဲ့ မူကတော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာသတ်မှတ်ချက်ကိုပဲ ကျယ်ပြန့်စွာ ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မသိတဲ့သူတစ်ဦးကို လက်ခံထားမိပြီဆိုရင်ဖြင့် သူဟာ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ ဆိုးတိုင်ပင် ကောင်းတိုင်ပင် သူငယ်ချင်းအစစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား။ အသိတစ်ယောက်လိုပဲ ချိတ်ဆက်ထားတာပါလားလို့ တွေးစရာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Online linking တွေကြောင့် လူမှုရေး ပြဿနာတွေလည်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းစာရင်းဟာ ရှည်လျားလာသလို ပြဿနာရပ်တွေကလည်း ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပဲ လူငယ်တွေ လုံးလည်ချာလည်လိုက်ပြီး လည်ပတ်နေကြတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုဆိုတာ ရေရှည်တည်မြဲလာနိုင်ပါ့မလား။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဒီလို facebook မှာပဲ ဘယ်သူက ဘာပုံတင်နေသလဲ။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်သတင်းတွေ ပို့ထားသလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဒီဝန်းကျင်မှာ မနေကြတော့ပဲ ၀န်းကျင်အပြင်မှာရှိတဲ့ နေရာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ကြည့်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပါရစေတော့ရှင်။
နည်းပညာတိုးတတ်မှုကတော့ရေရှည်ဖြစ်နေမယ့် ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ ။ အဓိကကျတာကတော့ လှူငယ်တွေရဲ့အသိဥာဏ်ရှိဖို့နဲ့အတုယူမမှားဖို့ပဲလို့ထင်ပါတယ်
ကောင်းတာတွေရှိသလို ဆိုးနိုင်တာတွေကလည်း ဒွန်တွဲနေကြတာပါပဲ။ ကိုယ်က ဘာယူမယ်ဆိုတာပဲ ကွဲပြားပြီးလုပ်ကြတာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်နေကြတာဆိုတော့က တိုက်တွန်းလို့ ပဲရမယ်။ ဒီခေတ်က လုပ်ရမယ် မလုပ်ရဘူးလို့ ပြောနေလို့ မရဘူး။ နည်းပညာကတော့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကို ဆက်လက်တိုးတက်နေဦးမယ်လို့ လည်း ယုံကြည်နေမိတာတော့အမှန်ပဲ။
အင်တာနက် သုံးတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ပထမဆုံးပြေးမြင်မိတာကတော့…
ဂူးဂဲလ်ကြီးပါပဲ… ဘယ်အင်တာနက်သင်တန်းမဆို ပထမဆုံးသွားတာက http://www.google.com..
ပီးတော့ http://www.people.com.mm တို့ လို့ ပြည်တွင်းဆိုက်လေးတွေ ဂျီမေးလ်တွေ သုံးပြသင်ပြတယ်…
ဒါက အင်တာနက်သုံးတယ်လို့ ပျှမ်းမျှသိထားတာ….
ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်တာက ဖေ့ဘွက်….
အရင်တုန်းကဆို ကျွန်တော် ဖေ့ဘွက် မသုံးဖြစ်ပါဖူး…
ဒါပေမယ့် အခုတလော သတင်းတွေကို တောက်လျှောက်ကြည့်ဖို့ လိုလာတော့….
ရှိသမျှ သတင်းဝတ်ဆိုက်တွေကို Like လုပ်ပီး Update ဖြစ်လာတဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ကြည့်နေရတယ်….
သုံးတာ သုံးတာပါ ကိုယ့်ပုံကိုယ်တောင် မတင်ဖြစ်တာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပါပီ…
မနေ့ တနေ့ ကမှ သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောလွန်းလို့Profile လေးပြောင်းမိပါတယ်…. အပြောခံရတာနဲ့ တောင် မတန်ဖူး…
ဂျီမေးလ် Office Mail သုံးတာကတော့ ပြောမနေ ပါနဲ့ တော့…
အဲ့ဒါကလွဲလို့တခြားကို သွားမိတာကတော့ ဂေးဇက်ရယ် First Eleven ရယ်ပဲရှိပါတယ်….
အဲ့လိုဆိုတော့ မနောဖြူပြောတဲ့ လူတွေထဲ ကျွန်တော်ပါ ပါသလိုလိုဖြစ်နေတယ်….
ဆိုလိုချင်တာက ဖေ့ဘွက်သုံးရင် ဂျီးတော်တော့လ် ပြောရင် ဂျီးတော်မေးလ် သုံးရင် မကောင်းဖူးလား….
တခြား ဆိုက်တွေကို သွားမှ ဖြစ်မှာလား….
“ ဟဲ့အကောင် နင်တခါလာလည်း ဖေ့ဘွက် တခါလာလည်း ဂျီးတော်မေးလ်… တခါလာလည်း ဂေးဇက်….
တနေ့ တနေ့ဒါနဲ့ ပဲအချိန်ကုန်တော့မှာလား “
ဆိုလိုချင်တာက လူကြီးတွေက ဒါမကောင်းဖူးလို့ မပြောသင့်ပါဖူး…. ဒါကို ကောင်းအောင် ဘယ်လို သုံးရမလဲပဲသင်ပြပေးသင့်ပါတယ်….
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတယောက်ဆို English Learning ဆိုက်မှာ Subscription လုပ်ပီး Email ထဲကို နေ့ တိုင်း ပြင်သစ်စာ လုံးအသစ်လေးတွေ ၀င်ဝင်လာပါတယ်….
တနေ့တလုံး ပြင်သစ်စာ ဘယ်ရွေ့ မလဲသင်လာတာ အခုဆို တိုးဂိုက်လုံးလုံးဖြစ်နေပါပီ….
လူတွေက တခါတလေ ခနတာကိုပဲမြင်တက်ပါတယ်….
ခနတာ အမြင်ကို ဂရုဏဒေါသနဲ့ဆုံးမမိရင် ဖြစ်တက်တာလေး ပြောမိတာပါ….